Traduzioni di nangamacangci da Xhosa a Latino - MyMemory
Hai cercato la traduzione di nangamacangci da Xhosa a Latino
UDavide namaSirayeli onke baqamba phambi koYehova ngamandla onke, ngeengoma, nangeehadi, nangemirhubhe, nangeengqongqo, nangamacangci nangamaxilongo.
UDavide nabathetheli-mkhosi babahlulela inkonzo oonyana baka-Asafu noHeman noYedutun, baprofeta ngeehadi nangemirhubhe nangamacangci. Inani lawo la madoda asebenzela inkonzo yawo laba leli:
igitur David et magistratus exercitus secreverunt in ministerium filios Asaph et Heman et Idithun qui prophetarent in citharis et psalteriis et cymbalis secundum numerum suum dedicato sibi officio serviente
Ke kaloku ekusungulweni kodonga lweYerusalem kwafunwa abaLevi ezindaweni zabo zonke, ukuba baziswe eYerusalem, ukuba ukusungulwa kwalo kwenziwe ngovuyo, nangemibulelo, nangeengoma, nangamacangci, nangemirhubhe, nangeehadi.
kwathi ke abavutheli bamaxilongo neemvumi bavakalisa njengamntu mnye, ngazwi-nye, bedumisa, bebulela kuYehova. Bathi ke bakuphakamisa ilizwi ngamaxilongo, nangamacangci, nangeempahla zokuvuma, nangokumdumisa uYehova, besithi, Ulungile, inceba yakhe ingunaphakade: yesuka indlu yazala lilifu lendlu kaYehova;
mai aapke call ka intezar kar raha hun (Hindi (indiano)>Inglese)hus (Norvegese>Polacco)change for better (Inglese>Tagalog)kadama meaning (Inglese>Tagalog)izņemt proeci (Lettone>Inglese)baada ya kazi (Swahili>Spagnolo)mata batin (Indonesiano>Inglese)i am at the ft lauderdale airport (Inglese>Portoghese)扶老人 (Malese>Cinese semplificato)halik (Inglese>Tagalog)intendete (Italiano>Chamorro)Επολιορκει (Greco>Italiano)ang pag aasaw (Inglese>Tagalog)en tout lieu (Francese>Inglese)hyperexcitability (Inglese>Lettone)disesalkan (Indonesiano>Arabo)saxis (Latino>Inglese)változat (Ungherese>Estone)sandwshing (Ceco>Svedese)sambil (Malese>Inglese)sahur (Malese>Cinese semplificato)cunctis pramissis (Latino>Inglese)paet (Inglese>Tagalog)hubiese controlado (Spagnolo>Cinese semplificato)infrastrukturer (Danese>Inglese)